UBAX EE FARXADDA DUMARKA: WAXA LOO YAQAANO SI KALA DUWAN, SIDA MAGACIISU SI SAX AH U DHAWAAQAYO CILMI AHAAN IYO SABABTA, IYO SIDOO KALE SAWIR KA MID AH SPATHIPHYLLUM IYO CIRRIDKA GURYAHA - SOOSAARKA DALAGGA
Muxuu ubaxu u leeyahay farxad gabdhaha leh magacyo badan iyo sidee caan loo yiraahdaa?
Inta badan, hambalyo haweenka ku saabsan fasaxyada ayaa ku dhammaada weedha: "Waxaan kuu rajeyneynaa farxad gabar dumar ah." Qof kasta, iyadoon loo eegin da'diisa iyo jinsigiisa, waa in uu dareemaa runtii farxad. Sidaa daraadeed, si loo gaaro hadafkani wuxuu soo saaray khudbado kala duwan. Waxaa jira xitaa dhirta kuwaas oo ah nooc ka mid ah taliyayaasha, oo keenaya farxad iyo raaxaysi guriga.
Wixii dhirta gudaha ah ee caawiya qof, oo ah, haweeney si ay u hesho farxad haween ah, waa ubax leh magaca qosolka "Gabadh Dumar". Waxaa la rumeysan yahay in si taxadar leh oo daryeel loogu hayo isaga, waxaad ku guuleysan kartaa guusha dhaqaale, horumarinta caafimaadka iyo qoyskaaga ka ilaali xun.
Waa maxay dhaqanka loo yaqaan cilmi ahaan?
Magaca "Buclaga Haweenku" waa, dabcan, ma aha cilmi, rasmi ah ubaxa waxay ku dhejisaa magaca Spathiphyllum.
Spathiphyllum, ama Spathiphyllum (Spathiphyllum) ayaa iska leh caleenta qaxwada badan ee qoyaanka Aroid (Araceae).
Halkan waxaad ka arki kartaa sawirada warshadahan gudaha ah.
Sidee geedka loo yaqaan 'si kala duwan'?
Dadku waxay ku soo baxeen dhowr magacyo oo dheeraad ah spathiphyllum., oo ay ka mid tahay "cagaarka madow" iyo "calaamadeeye". Naannadahani waxay u muuqdeen sababtoo ah qaabka ubaxyada ee dhirta.
Waxaa jira magac kale - tani waa "ubaxyada aroosyada". Waxay ku xiran tahay xaqiiqda ah in haweenka kelidood ah ay qasab tahay inay helaan ninkooda haddii ay ku nool yihiin spathiphyllum gurigooda.
Magaca Spathiphyllum wuxuu ka yimid labo erey oo Giriig ah: σπάθη (spathe) waa "dabool" iyo φύλλον (phyllon) waa "caleen". Qeexitaanka macneheedu waxa weeyi macnaha ereyga "sida warqad la mid ah." Xaqiiqdii, inta lagu jiro ubax, dhirta waxay soo saartaa ubax midab cad, taas oo aad u la mid ah xaashi joogto ah.
Waxa kale oo la rumeeysan yahay in warshadda Spathiffilum magaceeda loo magacaabay sababtoo ah caleemaha cidhiidhiga ah oo u eg daaqada spatu.
Ubax ee spathyphyllum waxay ku calaamadeyneysaa soo noqoshada farxada iyo fayoobida guriga.
Haddii naagtu ay cidlo tahay, markaa hubaal waxay la kulmi doontaa ninkeeda.
Haddii gabadh ay muddo dheer ku jirtay xiriirka dheer, ka dibna waxay dhawaan u guursan doontaa.
Haddii naagtu ay isqabto, waxay heli doontaa farxad iyo farxad weyn.
Haddii haweeney runtii rabto caruurta, markaa way heli doontaa.
Intaa waxaa dheer, haddii guriga uu sii kordhayo spathiphyllum, markaa guriga ayaa laga ilaaliyaa muran, xadgudub.
Dadku waxay isbarbardhigaan ubax dhirta oo leh daahir iyo xurmayn., taasi waa, waxaa la aaminsan yahay in spathiphyllum waa calaamad ka mid ah dumarka. Spathiphyllum waxay leedahay awood mucjiso inta lagu jiro ubax. Wuxuu caawiyaa hooyooyinka aan carruurta qabin inay uuraystaan ​​carruurta. Tan waxaa loo aaneynayaa xaqiiqda ah in ubaxa ubaxa u eg yahay timir, kaas oo dhagax yar oo cad oo ku yaal.
Ubax ayaa soo baxaya waqti dheer, taas oo sidoo kale soo jeedinaysa isbarbardhigga uurka. Marka ugu horeysa waa cagaar, laakiin si tartiib ah ubaxu waxay u soo noqotaa hooska barafka cad. Spathiphyllum wuxuu ku faraxsan yahay ubax waqti dheer.
Xaggee ayuu magacan ka yimid?
Lama ogaan karo waxa loo yaqaan "spathiphyllum" ee "Rajada haweenka"Laakiin waxaa jira halyeey ah oo u muuqday waqtiga Spathiphyllum yimid Ruushka. Halyeeyga ayaa sheegaya in ilaahadda jacaylka Astarte ay ka samaysay qoraallada Giriigta ah ay ku dhufteen qayb ka mid ah ubax, sidaas awgeed isaga siinaya awoodda si loogu abaalmariyo milkiilayaasha farxad, iyo inay xiriirkooda iskaashi la yeeshaan.
Waa maxay magac kale oo loogu talagalay waana sax in la sameeyo?
Dumarka kuwaas oo xiiseynaya sifooyinka aan caadiga ahayn ee ubaxa, waxay ku turjumi karaan wixii macluumaad ah in dhirta ay awood u leedahay in ay ka kaxeeyaan guriga dadka. Tani waxay ka xanaajin kartaa, ka takhalusi spathiphyllum.
Tani waxay sabab u tahay barista Feng Shui, taas oo geedka ayaa si khaldan loo yiraahdaa "carmalka ilmogaleenka"Macluumaadkani waxay carqaladeeyeen milkiilayaasha ubaxa, qaar badan oo ka turjumaya magaca cilmiga ah ee Shiinaha si gebi ahaanba ah, taas oo muujinaysa in aysan suuragal u ahayn in ubaxkan lagu hayo guriga.
Tani waa arrin qaldan, xaqiiqda, magaca Spathiphyllum wuxuu ka yimid Giriig, mana aha macnaha gebi ahaanba ka duwan. Magaca naaneyska "Dumarka dharbaaxo" - waxay leedahay ubax Hoya, oo la xidhiidha arin xun.
Ubaxa-Mucjiso "Wanaagga Dumarka" wuxuu awood u yeelan karaa inuu abuuro mucjisooyin dhab ah - kali ah, riyadiisa guurka dumarka si uu u siiyo jacayl qurux badan iyo ninkeeda daryeel leh. Qoyska, halkaas oo ay jiraan inta badan fadeexado iyo isfaham la'aan, waxay heli doonaan nabad iyo xasillooni. Waxaad rumaysan kartaa kalimooyinka iyo hantida qadiimka ah, laakiin ha iloobin in aad rabto inaad ku guuleysato.